Gaadiidka Mareykanka | Safarka Absolut
Mareykanku waa waddan ballaaran oo si aad ah uguxiran gudaha gudaha iyadoo loo adeegsado gaadiid kaladuwan sida tareenka, diyaaradda, gaariga iyo baska.
Shabakada gaadiidka Mareykanka waa mid aad wax ku ool u ah guud ahaan shuruudaha waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku safarto dalka oo dhan si raaxo leh oo dhakhso leh. Haddii aad qorsheyneyso safar aad ku tageyso Mareykanka oo aad rabto inaad ogaato sida aad uga guuri karto xeeb ilaa xeeb, ha moogaanin qodobkaan aan ku sharaxeyno maxay yihiin taraafikada Mareykanka.
1.1 Goorma ayaa diyaarad lagu raacayaa Mareykanka?
1.2 Diyaaradaha aad raaci karto
2.1 Maxay ku qaadataa in lagu kaxeeyo Maraykanka?
2.2 Maxaad u baahan tahay inaad ogaato inaad ku kaxeyso Mareykanka?
3 Gaadiidka dadweynaha ee Mareykanka
3.2 Tareenadu maxay kala yihiin Mareykanka?
3.3 Maxay yihiin safarada lagu sameeyo tareenka Mareykanka?
3.5 Maxay yihiin shirkadaha basaska waaweyn?
Diyaaraddu waa habka ugu habboon ee gaadiid ugu kala gooshi karto waddanka gudihiisa illaa gobol kale maaddaama shabakadda duulimaadyada qaranku ay tahay mid ballaadhan oo la isku halleyn karo iyadoo kumanaan duulimaad maalinle ah, duulimaadyo badan iyo boqollaal garoon diyaaradeed. Inta badan magaalooyinka waaweyn waxay leeyihiin ugu yaraan hal garoon diyaaradeed oo leh duulimaadyo toos ah iyo isku xirnaan.
Dalku aad buu u ballaadhan yahay markaa haddii hal mar aad rabto inaad u safarto min xeeb ilaa xeeb waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah, waxaa ugu wanaagsan inaad diyaarad raacdo maadaama safarku kugu qaadan doono wax ka yar lix saacadood marka la barbar dhigo safarka dhowr maalmood oo ay ku lug leedahay safarka tareenka ama baabuurka.
Goorma ayaa diyaarad lagu raacayaa Mareykanka?
Haddii aad raadineyso inaad lacag ku keydiso tikidhadaada diyaaradda, waxa ugu fiican ee la sameeyo ayaa ah inaad qorsheyso safarkaaga ka hor. Waqtiyadi hore, diyaaradaha waxay isku dayeen inay ka takhalusaan kuraasta xad dhaafka ah daqiiqadii ugu dambeysay, sidaas darteed waa inaad sugto waqti dheer si aad u hesho tikidhada duulimaadyada ee jaban. Si kastaba ha noqotee, maanta xaaladdu way is bedeshay oo waxaa jira shirkado duulimaad oo had iyo jeer dadka safarka ah siiya qiimo wanaagsan.
Waqtiyada qaarkood sida fasaxa guga, xagaaga ama habeenka ciidaha iyo ciidaha bangiyada, sugida ilaa maalinta ugu dambeysa si aad u hesho tikidhada duulimaadka way qaali noqon kartaa maxaa yeelay waa xilli sare safarka diyaaradda ee Mareykanka waa qaali Haddii aad fursad u leedahay inaad u safarto Mareykanka inta lagu jiro xilliga hoose, waa tan ugu habboon maxaa yeelay tigidhada diyaaraduhu way ka jaban yihiin. Waxay la mid tahay safarka maalmaha shaqada halkii usbuuc-dhammaadka. Sidan ayaad lacag badan ku keydin doontaa.
Diyaaradaha aad raaci karto
Qaar ka mid ah diyaaradaha qaran ee ka shaqeeya Mareykanka waa: American Airlines, Delta Air, United Airlines, US Airways, Skywest Airlines, Southwest Airlines, Hawaiian Airlines ama Virgin America, iyo kuwo kale.
Dhammaan gobollada dalku waxay leeyihiin tiro wanaagsan oo garoomo diyaaradeed ah oo maalin walba u duula magaalooyin kala duwan. Xaqiiqdii, Mareykanka wuxuu leeyahay 375 garoon diyaaradeed oo gudaha ah.
Markaad ku dhex safreyso Mareykanka fasax, safar badan ayaa doorta gaariga maxaa yeelay waxay noqon kartaa wax xiise leh. Waana taas mid ka mid ah safarada ugu caansan dalka waa Wadada 66 sidoo kale loo yaqaan "wadada ugu weyn Mareykanka."
Dherer ahaan ku dhowaad 4.000 oo kilomitir, Wadada 66 waxay dalka uga gudubtaa bari ilaa galbeed iyadoo loo marayo sideed gobol (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona iyo California) oo ka timaada Chicago una soo afjaraya Los Angeles. Jidka lagu maro gaari ama mooto waa safarka riyada ee dad badan. Si kastaba ha noqotee, Si aad ugu dhex wareegto Mareykanka baabuur waa inaad taqaanaa sida loo kaxeeyo halkaas maxaa yeelay sharciyadiisu way ka duwanaan karaan kuwa dalkaaga.
Maxay ku qaadataa in lagu kaxeeyo Maraykanka?
Haddii aad u safreyso dalxiis ahaan, gobollada badankood waxaad u baahan doontaa liisanka wadista caalamiga ah. Laga yaabee markaad tagto inaad kireysato gaari ma weydiisan doonaan laakiin qaadashada waligeed dhib malahan maxaa yeelay aad ayey u fududahay in la helo.
Tusaale ahaan, marka laga hadlayo Spain si aad u hesho waa inaad haysataa liisanka wadista oo ansax ah hawshana si dhakhso leh ayaa looga samayn karaa khadka tooska ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa aqoonsi elektiroonig ah, buuxi foomka si aad u codsato rukhsadda oo aad u bixiso khidmadaha. Laba maalmood ka dib waxaad ka qaadan kartaa xafiis kasta oo taraafiko ah oo soo bandhigaya aqoonsigaaga si aad u aqoonsato naftaada iyo sawir midab leh oo hadda ah 32 x 26 mm. Marka la soo saaro, liisanka wadista caalamiga ah wuxuu leeyahay mudo ansax ah oo hal sano ah.
Xusuusnow in baabuur laga kireysto Mareykanka da'da ugu yar ee loo baahan yahay waa 21 sano, in kastoo gobollada qaarkood ay noqon karto 25 sano.
Maxaad u baahan tahay inaad ogaato inaad ku kaxeyso Mareykanka?
In kasta oo aad tahay waddan leh dhaqan Anglo-Saxon, Mareykanka gudihiisa waxaad ku kaxeysaa dhinaca midig, isla wadada wadada inta badan waddamada Yurub iyo Spain. Si kastaba ha noqotee, waa inaan maskaxda ku haynaa in gobol kasta uu yeelan karo xeerar kala duwan oo taraafikada ah. Sidaas, Kahor intaadan bilaabin wadista baabuurka, waa inaad ka ogaataa calaamadaha waddooyinka iyo xadka xawaaraha ee gobollada aad booqaneyso.
Dhinaca kale, Mareykanku waa dal leh dhul ballaadhan oo dhul yar oo la deggan yahay oo dabeecadda duurjoogta ahi ka talinayso, sidaa darteed haddii aanad garanayn dhulka ay u fududahay dib u dhac inuu ku yimaado oo ku lumo. Si tan looga fogaado, haddii aad gaari ka kireysaneysid Mareykanka, hubi inaad keento GPS oo casriyeeyay khariidadaha waddooyinka.
Gaadiidka dadweynaha ee Mareykanka
Beddelka kale ee lagu maro Maraykanka waa tareenka. Waa ikhtiyaar wanaagsan haddii aad haysato waqti badan oo aad ku safarto, haddii aadan haysan liisanka wadista caalamiga ah ama haddii aadan rabin inaad noloshaada ku adkaato GPS iyo tilmaamaha markaad gaari kireysaneyso. Maxaa intaa ka badan, Haddii aad dooratid tareenka aad ku dhex wareegto Mareykanka, faa'iidada ayaa ah inaad ku raaxeysan karto muuqaal qurxoon (seeraha waaweyn, buuro dhaadheer iyo tuulooyin qurux badan) intaad si raaxo leh ugu safarto.
Dalka Mareykanka, yaa bixiya adeeggan waa Amtrak, Hawlwadeenka tareenka ee isku xira Waqooyiga Ameerika iyada oo loo marayo nidaamkeeda in ka badan 30 dariiq oo tareenadoodu u safraan in ka badan 500 oo goobood oo ku kala yaal 46 gobol iyo Washington DC
Waad ku mahadsan tahay isku xirnaanta kaladuwan ee magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, haddii aad go'aansato inaad ku safarto tareen waxaad ku safri kartaa tareen si aad ugu tagto New York, Philadelphia, Boston, Chicago, Washington DC, Los Angeles iyo San Francisco. Magaalooyinka kale ee dalka waxaa laga yaabaa inay lahaadaan xiriirro tareen oo hal-dhinac ama laba-jid ah oo yar yar oo loogu kala safro bartamaha.
Intaas waxaa sii dheer, magaalooyin badan oo dalka ka mid ah waxay leeyihiin nidaamyo tareen magaalo oo inta badan bixiya isku xirnaanta saldhigyada tareennada maxalliga ah waxayna dhex maraan magaalooyinka iyo xaafadaha ka baxsan.
Tareenadu maxay kala yihiin Mareykanka?
Inta badan tareenada Amtrak waxay leeyihiin kursi aad u waasic ah oo lugahaaga kala bixiya oo nasanaya, oo leh Wi-Fi bilaash ah, musqulo, iyo cunto. adeegyada kale. Intaa waxaa dheer, safaradaas masaafo aad u dhaadheer leh waxaa jira gaari-gacmeedyo leh qaybo hurdo.
Maxay yihiin safarada lagu sameeyo tareenka Mareykanka?
Jidadka ay Amtrak siiso rakaabka, waxaa jira laba in, gaar ahaantooda awgeed, ay noqon doonto khibrad aad u xiiso badan oo la sameeyo: tareenka California Zephyr (oo raacaya waddada ay baadi-goobayaashu u mareen dhinaca galbeed illaa iyo 7 gobol oo qurux badan) ama tareenka Vermonter (si aad u aragto muuqaalka quruxda badan ee New England, magaalooyinkeeda taariikhiga ah iyo kaniisaddeeda leh dabaqyo dhaadheer).
Mid ka mid ah gaadiidka ugu isticmaalka badan Mareykanka ee lagu dhex wareego waddanka waa baska. Sababaha loo doortay waa badan yihiin: shirkado badan oo kala duwan oo bixiya adeegga oo leh qiime dhammaan miisaaniyadaha, xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya magaalooyin badan iyo baabuur nadiif ah, raaxo leh oo ammaan ah.
Inta badan magaalooyinka waaweyn waxay leeyihiin shabakado basas maxalli ah oo la isku halleyn karo, in kasta oo adeegyadu dhammaadka usbuuca iyo habeenkii ay kooban yihiin.
Haddii waqtigu aanu dhib ahayn, basku wuxuu noqon karaa hab aad u xiiso badan oo lagu sahamin karo waddanka maadaama uu kuu oggolaanayo inaad aragto meelaha fogfog iyo dhul aad u kala duwan oo aan suurta gal ahayn haddii aad diyaarad ku sameysay.
Maxay yihiin shirkadaha basaska waaweyn?
Greyhound: waa shirkad basaska masaafada fog udheela oo daboolaya dariiqyada ficil ahaan wadanka oo dhan iyo Kanada.
Boltbus: wuxuu inta badan ka shaqeeyaa aagga waqooyi-bari (inta badan New England iyo gobolka New York iyo meelaha kale).
Megabus: shirkaddani waxay isku xirtaa in ka badan 50 magaalo waxayna sidoo kale leedahay waddooyin loo maro Kanada. Waxay leedahay qiimo aad u tartan badan.
Vamoose: mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ay isticmaalaan kuwa u kala goosha Washington iyo New York badanaa.
Maaha gaadiid loo adeegsado in lagu kala safro magaalooyinka laakiin isla deegaankaas. Dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka waxay leeyihiin raxan tagsi oo badan. Garoomada diyaaradaha badanaa way fududahay in taksi la raaco maxaa yeelay way badan yihiin oo dalxiisayaasha u kaxeeya bartamaha magaalada, laakiin taa bedelkeeda way ka yara dhib badan tahay badanaana ma sahlana in la helo mid bilaash ah.
Ka soo horjeedka waxa dad badani u muuqdaan inay aaminsan yihiin, tagaasida New York maaha kuwo aad qaali u ah. Celceliska qiimaha safarka caadiga ah ee loo maro Manhattan waa ilaa $ 10 laakiin hadaad xoogaa deg deg tahay, waxaan kugula talinayaa inaad raadsato waxyaabo kale sida tareenka dhulka hoostiisa mara maxaa yeelay taraafikada Manhattan waxay noqon kartaa yara fowdo iyo ciriiriga taraafikada ayaa u muuqda inuu sameysmayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Gaadiidka Mareykanka